खोप आइपुग्दा समेत सञ्चालनमा नआएको भीमदत्तनगरको पिसिआर !! - Rubas News
खोप आइपुग्दा समेत सञ्चालनमा नआएको भीमदत्तनगरको पिसिआर !!
महेन्द्रनगर : कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले खरिद गरेको पीसीआर मेसिन ६ महिना भन्दा बढी भइसक्दा समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
कोरोनाको संक्रमण बढीरहेका बेला गत असार अन्तिममा नगरपालिकाले ३८ लाख रुपैयाँ लागतमा पीसीआर मेसिन र पीसीआर क्याबिनेट खरिद गरेको थियो । जिल्लामा संक्रमित बढ्न थालेपछि जनस्तरबाट पिसीआर परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने माग बढेपछि भीमदत्त नगरपालिकाले मेसिन गरेको हो । तत्कालै परीक्षण थाल्ने बताइए पनि ६ महिना भन्दा बढी बितिसक्दा समेत मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएको छैन ।
भीमदत्त नगरपालिकाले मेसिन खरिद गरेको ३ महिनापछि मात्रै महाकाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
सुरुमा भीमदत्त नगरपालिकाले नै मेसिन सञ्चालनमा गर्ने तयारी बमोजिम मसिन खरिद गरिएपनि आवश्यक जनशक्ति ,पूर्वाधार लगायतको समस्याका कारण भीमदत्तनगरपालिकाले मेसिन खरिद गरेको तीन महिनापछि महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हो । पीसिआर सञ्चालनका लागि महाकाली अस्पतालले समेत मेसिन सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएपछि जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहलाई पिसिआर सञ्चालन गर्न सहयोगका लागि पहल गरिएको थियो । तर अन्य स्थानीय तहले भने मेसिन सञ्चालनका लागि सहयोग गरेरनन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टले सुरुमा नगरपालिका एक्लैले मेसिन सञ्चालन गर्ने उदघोष गरेपनि त्यो सम्भव नभएपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिन महाकाली अस्पताललाई पिसीआर हस्तान्तरण गरेको स्थानीय अगुवाको भनाई छ । नगरपालिकाले सस्तो लोकप्रियताका लागि पिसीआर खदिर गरेर स्रोतको दुरुपयोग गरेको नागरिक समाजका अगुवाले टिप्पणी गरेका छन । “भीमदत्तनगरपालिकाले तामझामका साथ पिसीआर खरिद गर्ने भनेर धेरै प्रचार भयो ।” नागरिक समाज कञ्चनपुरका पूर्व अध्यक्ष नगर वहादुर साउदले भने–“मेसिन किनेर त्यसको उपयोग भएन ।” कोरोना महामारीका बेला सञ्चालनमा आउनु पर्ने पिसीआर मेसिन अब सञ्चालनमा आउनुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाई छ ।
देशैभरी कोरोना विरुद्धको खोप अभियान समेत सञ्चालन भइसकेको छ तर नगरपालिकाले खरिद गरेको पिसीआर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कोरोना महामारीका बेला सञ्चालनमा नआएको पिसीआर मेसिनको अब सञ्चालनमा आउनुको महत्व नरहेको स्थानीयको भनाई छ । “कोरोना संक्रमण तिब्र बढीरहेका बोल पिसिआर परिक्षण गर्नुपथ्यो त्यो भएन ।” स्थानीय अच्युत कलौनीले भने–“भीमदत्तले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै पिसीआर खरिद गरेको देखियो ।”
उता महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले भने एक्लैले पिसीआर मेसिन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।नगरपालिकाले पिसीआर मेसिन मात्रै सहयोग गरेर र त्यो संग चाहिने अन्य उपकरण ,भौतीक पूर्वाधार ,जनशक्ति र बजेटका कारण मेसिन सञ्चालन गर्न ढिलाई भएको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हरि कुमार श्रेष्ठको भनाई छ । “भीमदत्तबाट हामीलाई मेसिन मात्रै हस्तान्तरण गरिएको हो त्यो संग चाहिने अन्य उपकरण नहुँदा सञ्चालनमा ढिलाईए भयो ।” उनले भने–“महाकाली अस्पताल एक्लैले पिसिआर सञ्चालन गर्न सक्दैन ।
पिसीआर सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति अस्पतालले तयारी अवस्थामा रहेको जनाएपनि आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहुँदा पिसिआर सञ्चालन हुन अझै केही दिन लाग्न सक्ने जनाएको छ । अस्पतालले पिसीआर सञ्चालनका लागि मासिक १० लाख भन्दा बढी खर्च लाग्ने जनाएको छ । महाकाली अस्पतालले अहिले पनि दिनमा ३०÷४० जनाको स्वाब संकलन गरिरहेको छ । परीक्षणका लागि धनगढी नै पठाउनुपर्ने र रिपोर्ट पाउन दुईरतीन दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
यता भीमदत्त नगरपालिकाले भने पिसीआर मेसीन महाकाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्टले महाकाली अस्पताललाई मेसिन हस्तान्तरण गरेको बताउँदै अन्य उपकरण र जनशक्ति अस्पतालले बेहोर्नु पर्ने बताए ।
Previousबाँकेमा कोभिड-१९ बाट एक स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु
Nextकञ्चनपुरमा निर्वाचनको तयारी तिब्र
सिमा अतिक्रमणको विरोधमा साहित्यकार सडकमा